(Emelitere ikpeazụ On: 23/10/2020)
Ee, ụgbọ okporo nri na-adị ịtụnanya ma ọbụna nke kacha mma ụgbọ okporo nri -eji tụnyere Copenhagen si ma ọ bụ! bụ ogidi ọkụ nke Nordic nri, na ị ga-eme ihe niile i nwere ike ime iji na-aga lelee ya. Ọ bụghị nanị na nke a na otu onye bụ otu n'ime Best Ọnọdụ maka foodies na Europe, eatery kemgbe Mba. 1 ntụpọ na San Pellegrino ndepụta maka afọ! Ee, ndị ahịa na-elu, ma uto ị na-na-bụ uru ọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ gbapụta ka Scandinavia ụgbọ okporo ígwè, Copenhagen bụ oké ọnụ ụzọ ámá na-akwụsị na-eme nnọọ nke ahụ.
anyị akara ndepụta anyị kacha mma obodo maka Foodies na Trieste, Italy
Trieste bụ Austria na Hungarian Empire ruo mgbe Agha Ụwa Mbụ. Eziokwu a na-ebe a na-agbakwụnye na pụtara Trieste si atọ ụtọ efere. Gịnị? N'ihi Trieste akụkọ ihe mere eme ekpe a ọkpụrụkpụ mmetụta na ya nri. Atypical nke ahụkarị Italian efere, Trieste prides dị otú ahụ weird combos of pasta na Pizza n'akụkụ sauerkraut na sliced ​​soseji, na yiri. Enwe ọmarịcha nri, creamy chocolate, na fabulous kọfị na obodo ebe James Joyce malitere ekewetde Ulysses. A pụtara echiche gafee Adriatic agaghị egbu gị agụụ, ma. Njikọ dị n'etiti Italy na Slovenia zuru okè site okporo ígwè, otú i nwere ike inye Slovenia a ohere mgbe na obi.
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-foodies-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)